Super Eagles mere ndi Tahiti ji na aja na Confed Cup - Igbo News | News in Igbo Language
Jul 5, 2014 - 13:50 Updated: Jan 22, 2021 - 00:27
Na bọọlụ ahụ A kụrụ n'ama egwuregwu Mineirao, ndị Nigeria jiri ọkpụ goolu 6 A satara nanị 1 were merie mba Tahiti.
Ka O mechara nkeji atọ egwu ọkpa ahụ malitere, Uwa Echiejile pịara otu shọtụ. Bọọlụ ya kụrụ mmadụ abụọ n’ahụ tupu Ọ dakpuo n’ime postu. Nke a nyere Nigeria goolu izizi ya. Ebe ihe dịka nkeji 10, Nnamdi Oduamadi kpara mmadụ abụọ ndị difenda mba Tahiti were sụtara Nigeria goolu ọzọ, nke mere ya goolu abụọ.
Mgbe a gbachara bọọlụ ahụ, Nigeria nwetere ọkpụ 6 ebe mba Tahiti satara nanị otu.
Nigeria ga-ezute mba Uruguay n’abalị 20 nke ọnwa juunu.